धेरै अदुवा खानु हानिकारक हुन्छ,होसियार ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
धेरै अदुवा खानु हानिकारक हुन्छ,होसियार !
ओएस नेपाल, (काठमाडौँ )चैत १ -अदुवाको सेवन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । यसले कतिपय पेटका रोगबाट छुटकारा दिलाउँछ ।
तर आवश्यकता भन्दा बढि अदुवा खानाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पूराउने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार धेरै अदुवाको सेवनले मानिसमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्दछ ।
गर्भावस्थाको समयमा महिलाले धेरै अदुवा सेवन गर्नाले पाठेघरमा विकशित भैरहेको भ्रुणको सेक्स हर्मोनमा असर पूराउँछ । निकै धेरै अदुवा खानाले गर्भपातको जोखिम समेत हुने बताइन्छ । साथै बढि अदुवा खानाले गर्भवती महिलामा सुत्केरी हुने समयमा धेरै रगत बग्ने जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यद्यपि गर्भवती महिलाले थोरै मात्रामा अदुवा चपाउनु फाइदाजनक नै हुन्छ र यसले बिहानीपख हुने वाकवाकी रोक्न मद्दत गर्दछ । तर सुत्केरी हुने समय नजिकिएपछि गर्भवती महिलाले अदुवाको सेवन नगर्नु नै राम्रो हुने विज्ञहरुको सल्लाह छ ।
अदुवामा हुने तत्वले रगत जम्ने अर्थात् ब्लड क्लटिङको क्रियालाई धीमा बनाइदिन्छ । साथै यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्रालाई समेत कम गरिदिन्छ । औषधि सेवन गरिरहेका मधुमेहका रोगीले अदुवाको सेवन गर्नु लाभदायक मानिँदैन । अदुवाले उनीहरुको रगतको ग्लुकोजको मात्रा अस्वभाविक रुपमा निकै कम गरिदिने खतरा हुन्छ ।
धेरै अदुवाको सेवन गर्नाले मानिसमा अनिद्राको समस्या समेत उत्पन्न हुनसक्छ । महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्ने समस्या भएका महिलाहरुले तरकारी वा अचारमा अदुवाको मात्रा घटाउनु आवश्यक हुन्छ । धेरै अदुवाको सेवनले सरीरमा अम्लपनाको मात्रा समेत बढ्ने बताइन्छ ।अदुवाको सन्तुलित मात्रा भने सरीरका लागि लाभदायक नै हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार दैनिक २ ग्राम जति अदुवा खानु स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित तथा लाभदायक हुन्छ ।एजेन्सी
अस्ट्रेलिया अध्ययन सही समयमा निर्णय लिदा खुसी लाग्छ, अहिले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत हुदा थप अभिभारा थपिएको अनुभब हुन्छ
मानिस जन्मिएर पारिवारिक खुसीको साथ हुर्किएर, सपनाको संसारमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। सपनाको साथ पारिवारिक सहयोग,
दियो हरेक दिन बाल्नुहोस् ,सकरात्म उर्जाले जीबनले सफता प्राप्त गर्छ (भिडियो सहित)
दियो बाल्नाले संसारमा सकारात्मक उर्जा निस्कन सक्छ । ७ बजे र ७ मिनेटमा शुभ समय
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बागलुङकी ६५ वर्षीया वृद्धा भन्छिन्, ‘मेरो आत्मबल नै कडा छ, म कोरोनालाई जित्न सक्छु
बागलुङ नगरपालिकाकी ६५ वर्षीया महिला नेपालबाट कान्छी छोरी भेट्न गत फागुन १४ गते बेल्जियम पुगेकी